မိုးကောင်းကင်: ဘ၀ကို လှပစွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ကြပါစေ
ဤ ဆောင်းပါးလေးသည် သီတဂူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ဘ၀ ကောင်းကြောင်း တရားတော်မှ ထုတ်နုတ် ရေးသား ထားပါခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တရားတော်ကို နာယူရန် အချိန်မပေး နိုင်သော စာဖတ်သူများအတွက် ဒီဆောင်းပါးဖြင့် ကုသိုလ်ပြု ပါသည်။
လူသားတွေဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း အိုခြင်းတရားဆီသို. ဦးတည်သွား နေကြပါတယ်။ အိုတဲ့ဒုက္ခ၊ နာတဲ့ဒုက္ခ၊ သေတဲ့ဒုက္ခ၊ ဤ ဒုက္ခ သုံးပါး ကို ဘယ်သူမှ ရှောင်လွှဲလို. မရနိုင်ပါဘူး။
အို တဲ့အခါ မျက်စိတွေမှုန်၊ နားတွေလေး၊ အထိုင်အထခက်၊ အရည်ပြား တွေလည်းတွန်.၊ အသား အရိုး အကြော၊ စတဲ့ ရုပ် ပိုင်းဆိုင် ရာ ၀တ္တုတွေ အကုန်ဆွေးမြေ. ကုန်ကြပါတယ်။ ကံတရားဟာ နှစ်တစ်ရာခံအောင် ထောက်ပံ့မူ. မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိတို.ရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကို မည်မျှ ကြံ့ခိုင်အောင် ၊ မိမိတို.ရဲ့ မည်သို့သော ကံမျိုးက အထောက် အပံ့ ပေးထားသလဲ ဆိုတာကို နေ.တိုင်း စီစစ်ဖို. လိုပါတယ်။
မိမိက အတိတ်ကံ အားနည်းတယ်လို. ထင်လျှင် ပစ္စုပ္ပန် ကံကောင်းအောင် များများလုပ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံတွေက မည်မျှပင် ကောင်းနေ စေကာမူ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဓတ်တွေ သိပ်ကျဆင်း နေလျှင်လည်း အိုလွယ်ပါတယ်။
ကံတွေ၊ စိတ်တွေ၊ သိပ်ကောင်း နေပေမဲ့ အတွင်းက ဥတု ၊အပြင်က ဥတု၊ မညီညွတ် ရင်လည်း အိုလွယ်ပါတယ်။ ဥတု လည်း ကောင်းတယ် ၊ကံလည်း ကောင်းတယ်၊ စိတ်ဓတ် လည်းပဲ ရွှင်ရွှင်ပြပြ တက်တက်ကြွကြွ အမြဲတမ်း ရှိပေမဲ့ အဟာရဓတ် ညံ.ဖျင်း ရင်လည်းပဲ အိုလွယ်ပါတယ်။ နာလွယ်ပါတယ် ။ သေလွယ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ ဓတ်လေးပါး မညီညွတ်ပါက အိုလွယ်၊ နာလွယ်၊ သေလွယ် ပါတယ်။ ခန္ဓာရဲ့ အထောက် အပံ့ ဖြစ်တဲ့ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ ထိုလေးပါး ညီညွတ်မျှတ နေမှသာ အသက်ရှည်ဘို. အကြောင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခါက နတ်သားတစ်ပါးက ၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား မည်သည့် အရာသည် လူတို.အတွက် လူ.ဘ၀မှာ အိုသည့် တိုင် အောင် ၊ နာသည့် တိုင်အောင်၊ သေသည့်တိုင်အောင် ကောင်းတယ် ဆိုတာ ဘယ်အရာများ ဖြစ် သနည်း ဟုမေးမြန်း ရာ မြတ် စွာဘုရားရှင်က အောက်ပါ အတိုင်း ဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
၁။ အို သည့် တိုင်အောင် ကောင်းသည် ဆိုတာ " သီလ " ပါပဲ။
သီလ ဆိုသည်မှာ စည်းကမ်းပါ။ ကိုယ်အမူအရာနဲ့ နုတ်အမူအရာ တွေကို စောင့်ထိန်းတဲ့ စည်းကမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ သီလ ကောင်းတဲ့ လူဟာ အပြစ် ကင်းပါတယ်။ အပြစ်ကင်းလျှင် သုခ ချမ်းသာ ဆိုတဲ့ အကျိုးတွေ ရရှိနိုင်တာကြောင့်၊ မိမိ ကိုယ်မိမိ(confident) ယုံကြည်ခြင်း ကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ မိမိဘ၀ကို ယုံကြည် စိတ်ချ မူ.ရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သေလည်း သေရဲပါတယ်။ နေလည်း နေရဲပါတယ်။ သီလ ကောင်းရင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စွတ်စွဲခြင်း ၊ မိမိကိုသူတစ်ပါး စွတ်စွဲခြင်း၊ ဘေးမှလည်း ကင်းဝေးစေသောကြောင့် စိတ်က အမြဲတမ်း ကြည်လင် နေစေပါတယ်။ စိတ်ကြည်လင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရုပ်ပါ ကြည်လင်လာစေ ပါတယ်။
ရုပ်ကို စိတ်က အစဉ်သဖြင့် ပြောင်းလဲ စေပါတယ်။ လူတို.ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တကိုယ်လုံးဟာ သွေးများနဲ့ လည်ပတ် နေပါတယ်။ စိတ်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှု.ကြောင့် နှလုံးသွေးကလည်း ပြောင်းလဲလာပြီး မျက်နှာအနေ အထားလည်း ပြောင်းလဲလာတတ် ပါတယ်။ နှလုံးသွေးဟာ ဥာဏ်ဝင်တဲ့အခါ ပတ္တမြားရောင် တောက်ပါတယ်။ သဒ္ဓါ ၀င်တဲ့အခါ ရွှေရောင် တောက်ပါတယ်။ ရာဂ ၀င်လျှင် နီတတ် ပါတယ်။ မောဟ၀င်တော့ နီကျဲကျဲပါ။ ၀ိတက်ဝင်တော့ ဖြူကြဲကြဲ အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသ၀င်ရင် မဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်တိုတဲ့ အချိန်ဆိုရင် မျက်နှာပေါ်တွင် မဲပုတ် နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ရုပ်ကို စိတ်က အစဉ် သဖြင့် ပြောင်းလဲစေတဲ့ သဘော ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် မိမိတို. ရဲ့ ကိုယ် ၊ နုတ်နှစ်ပါး (ကာယကံ၊၀စီကံ) နှစ်ပါး ကို သီလ ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ စောင့်ထိန်း ရပါမယ်။ သီလ စောင့်ထိန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အပြစ်ကင်းပြီး၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် စွတ်စွဲခြင်း၊ သူတစ်ပါး စွတ်စွဲခြင်းတို.မှလည်း ကင်းဝေးပါတယ်။ စိတ်နှလုံး ကြည်လင် စေပါတယ်။ စိတ်နှလုံး ကြည်လင်သောကြောင့် နေတော့လည်း ကြည်လင် သေတော့လည်း ကြည်လင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိုသည့် တိုင်အောင် ကောင်းသည် ဆိုတာ သီလပါပဲ။ အိုခြင်း တစ်ရားကို သီလနဲ. တန်ဆာဆင်ပါ။
၂ ။ အို သည့် တိုင်အောင် ၊ နာသည့်တိုင်အောင်၊ သေသည့် တိုင်အောင် ကောင်းသည် ဆိုတာ " သဒ္ဓါ " ပါပဲ။
သဒ္ဓါ ဆိုတာက စိတ်ကိုကြည်လင် စေပါတယ်။ ဘာကြောင့် စိတ်မှာ သဒ္ဓါ ဖြစ်စေသလဲ ဆိုရင် ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးနဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ သာသနာတော်ရဲ့ ကျေးဇူးကို ယုံကြည်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ကြည်လင် လာလို.ပါ။ သဒ္ဓါဟာ၊ စိတ်ကို ကောင်းစွာ ကြည်စေ တတ်တဲ့ သတ္တိ အထူး ရှိပါတယ်၊ သဒ္ဓါ စိတ်ကြောင့်၊ သဒ္ဓါကောင်းဖြစ်ရင်၊ သဒ္ဓါကောင်းစွာရရင်
၁။ ကိလေသာ အကြမ်းစားတွေကို အနည်ထိုင် သွားစေပါတယ်။
၂။ စိတ်ပေါ်မှာ လွမ်းအုပ်နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကွာသွားစေပါတယ်။
၃။ ပူလောင်နေတဲ့ စိတ်နှလုံးသားတွေဟာ အေးချမ်း သွားစေပါတယ် လို.ဆိုထားပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်ကို ထပ်တလဲလဲ ပွားများခြင်းဟာ သဒ္ဓါ တရားကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓနုဿတိ ဘာဝနာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် မရှိရင် လောကမှာ အကျင့် သီလ ကောင်းသော်လည်း၊ ဘ၀ သံသရာမှာ အခက်အခဲ တွေ အများကြီး တွေ.နိုင်ပါတယ်။ မျက်မှောက် ဘ၀မှာ ခဏ၊ ခဏ စိတ်ညစ် ရတတ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ချက် မရှိလျှင် ဘ၀သံ သရာ ကို မကူး ခတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အို သည့်တိုင်အောင်၊ နာသည့်တိုင်အောင် ၊ သေသည့် တိုင်အောင် ကောင်း တာ သဒ္ဓါလို့် မိန့်ကြားတော် မူခဲ့ပါတယ်။
၃ ။ အို သည့် တိုင်အောင်၊နာသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသည် ဆိုတာ " ပညာ " ပါပဲ။
ပညာဆိုတာ အသေးစိတ် သိနားလည်ခြင်း (Detail Understanding) ပါ။ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေက သင်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာရပ်အပြင်၊ လောကကြီးကို အမှန်တကယ် မိမိကိုယ်တိုင် လျှေက်လှမ်း တဲ့အခါ ဘ၀မှာ ကြုံတွေ.လာတဲ့ ပြသနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို သိတာကိုလည်း ပညာလို. ခေါ်ပါတယ်။ ထိုပညာကို လောကထဲမှာသာ သင်ယူလို.ရနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာလောက ကြီးဟာ လူသားတို့ရဲ့ ဆရာသမား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ နုပျိုသော်ငြားသော်လည်း ပညာမတတ်လျှင် အချီးအနှီးပါပဲ။
ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ပညာတော့ သိပ်တတ်ပြီး၊ သဒ္ဓါခေါင်းပါးလျှင်လည်း ကောက်ကျစ်တဲ့ ပညာတတ် အဖြစ်သို. ရောက် သွားတတ် ပါတယ်။
သဒ္ဓါ ယုံကြည်ချက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်းထန်နေပေမဲ့ ပညာ(အသိဥာဏ်) ကင်းမဲ့တဲ့ ယုံကြည်ချက်ဆိုရင် အကန်းရုံ ဖြစ်သွား တတ်ပါတယ်။
သီလကင်းမဲ့ပြီး ပညာ သိပ်တတ်ခြင်း ဟာလည်း ယုတ်မာတဲ့ ပညာတတ် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသည်မှာ၊ သီလ၊ သဒ္ဓါ ၊ ပညာ၊ ပါပဲလို. မိန်.တော်မူခဲ့ပါတယ်။
၄။ အို သည့် တိုင်အောင်၊နာသည့်တိုင်အောင်၊ သေသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသည် ဆိုတာ " ပုညဆိုတဲု့သိုလ်ကောင်းမှု. " ပါပဲ။
မိမိ ဘ၀ တစ်လျောက်လုံး ကောင်းစေရန်အတွက် ကုသိုလ် ကောင်းမှု.တွေကို များများကြီး စုဆောင်း ထားသင့်ပါတယ်။ ရာထူး ဥစ္စာ၊ စီးပွား၊ တက်ချင်တိုင်း တက်ပါစေ။ ထိုအရာများဟာ နှစ်တစ်ရာ အတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင် ထားမယ်လို. ယုံကြည်လို. မရနိုင်ပါဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ ရှေ့သို့သာ ဦးတည် သွားနေပါတယ်။
ဒါကို ဥပမာလေး တစ်ခုနဲ့ ပြောပြရလျှင်တော့ - ရန်ကုန် ကနေ မန္တလေး သို. သွားမယ် ဆိုကြပါစို.။
ဘူတာကြီးသွားပြီး ရထားလက်မှတ်ဝယ် တဲ့အခါ လက်မှတ် လေးမှာ ခုံနံ ပါတ် လေးရေးပေး လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလက်မှတ် လေးကိုင်ပြီး ဒီတွဲနံပါတ်ဟာ ငါ့အတွဲ ၊ဒီခုံက ငါ့ခုံ၊ ဆိုပြီးတော့ တက်ထိုင်လိုက် ပါတယ်။ ရထားက ရန်ကုန်က နေထွက် သွားပြီး ပဲခူးရောက် ပါတယ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မိုင်ပေါင်း ၄၅၀ ကွာဝေးတယ်ပဲထား၊ ပဲခူးရောက်တော့ မိုင် ၅၀ ကုန်သွားပါပြီ။ သူပိုင်ဆိုင်ခွင့် မိုင် ၄၀၀ပဲ ကျန်ပါ တော့တယ်။ ရထားကလည်း ရှေ့သို.ပဲသွားပါတယ်၊ နောက်ပြန်မဆုတ်ပါဘူး၊ ပျဉ်းမနား ရောက်တော့ မိုင်နှစ် ရာကျော်သွားပြီ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် တွေက တဖြည်းဖြည်းလျော့ သွားပါတယ်၊ ရှေ.ကိုပဲ သွားရင်း၊ သွားရင်း နဲ့ ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ၊ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ငါပိုင် ငါပိုင် ဆိုတာတွေ တဖြည်းဖြည်း ကုန်ဆုံးနေတာကို အားလုံး သတိမပြုမိ လိုက်ကြပါဘူး၊
မန္တလေးဘူတာကို ရထားဝင်လို.၊ ရထားလည်းရပ်ရော ထိုရထား လက်မှတ်ဟာ ဘာမှ အသုံးမ၀င်တော့ သလို ၊ ငါ့တွဲ၊ ငါ့ထိုင်ခုံ ဆိုပြီး ယူသွားလို့ မရပါဘူး။ ဘူတာဆိုက်ရင် အကုန်လုံး ထားခဲ့ကြရမှာပါ။ ဘူတာ ဆိုက်တဲ့အခါ ရထားပေါ်ကယူ သွား လို.ရမှာက တွဲနဲ့ထိုင်ခုံ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်အိပ်ကပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ပိုက်ဆံဖြစ်တဲ့ ရိက္ခာထုတ် ကသာ ကိုယ့်သွား လေရာ သယ် သွား လို့ ရမဲ့ ရိက္ခာပါပဲ။ (ကိုယ့်ရဲ့ ရိက္ခာထုတ် ဆိုတာ ကိုယ်ပြုထားတဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှု.တွေကို ဆိုလိုတာပါ)
လူသားအားလုံးဟာ လူ.ဘ၀ခရီးမှာ ပိုင်ဆိုင်မှု.၊ စီးပွားဥစ္စာ၊ ရာထူး၊ တွေဆိုတာကတော့ ဘူတာ မဆိုက်ခင်လေး ပိုင်ဆိုင်ကြ ရတာပါ။ ဘူတာဆိုက်ရင် အကုန်လုံး ထားခဲ့ကြရမှာပါပဲ။
ပုညဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု.နှင့် ကိုယ်ပြုတဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ၀ိပသနာ ဆိုတဲ့ကောင်းမှု. တွေဟာ ရန်သူမျိုးငါးပါး တို့ လုယက် ဖျက်စီးလို. မရတဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိုသည့် တိုင်အောင်၊ နာသည့်တိုင်အောင်၊ သေသည့်တိုင်အောင် ကောင်းတယ် ဆိုတာ " သီလ၊ သဒ္ဓါ၊ ပညာ၊ နဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမူ." ပါပဲ။
ထိုလေးမျိုးဟာ ဘ၀ကို လှပစေဘို့ရာ ဘ၀ရဲ့အလှ တန်ဆာများ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ခန္ဓာကြီးကတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ငါးဆယ်ကျော်တာနဲ့ ဘ၀တစ်ဝက်ကျိုးတာနဲ့ ဆွေးမြေ့ပျက် စီးမှု့တွေ ထင်ရှားစွာ ပြပြလာမှာ ကိုတွေ.ရမှာပါ။ ဆွေးမြေ့ပျက်စီး သွားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကို ဒီလေးခုနဲ့ တန်ဆာဆင် အလှဆင်ပြီး အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်းတာသီလ၊ နာသည့် သေသည့်တိုင်အောင် ကောင်းတာ သဒ္ဓါ၊ အိုနာသေ ဘယ်လောက်နှိပ်စက် ပါ စေ ပညာနဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမူ. တို.သာလျှင် ဘ၀ရဲ့ကောင်းကြောင်း တရားတွေ ဖြစ်တယ် လို့ မြတ်စွာဘုရားက နတ်သားအား ဖြေကြား တော် မှုခဲ့ပါတယ်။
နတ်သားကလည်း ထိုအဖြေများအား ၀မ်းမြောက် ကျေနပ်သဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးဦးချကန့်တော့ပြီး သန်းကောင်ယံမှာ သူနဲ့ပါလာတဲ့ နတ်ပရိတ် သတ် ထောင်သောင်းကို ခေါ်၍ နတ်ပြည်သို့ ပြန်တော်မူပါတယ်။
ထို သီလရယ် သဒ္ဓါရယ်၊ ပညာရယ်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှု.ရယ် ဆိုတာကို သာဓုလေးပါးလို့ မှတ်သားထားကြပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့ အကောင်းတရားလေးပါးဖြစ်တဲ့ ထိုသာဓု တရားလေးပါးနဲ. မိမိတို့ရဲ့ ဘ၀ကို အိုသည့် နာသည့် သေသည့် တိုင်အောင် အကောင်းဆုံး အလှပြင်၍ တန်ဆာ ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု လိုက်ပါတယ်။
လောကမှာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေကြရာမှာ လောဘတွေ ၊ မောဟတွေ ၊ ဒေါသတွေ နဲ့ ဘဝမှာ လုံးထွေးဖြတ်သန်း နေကြသူတွေနဲ့ လောကကြီးကို နာကြီး စိတ်နာပြီး ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်မြင် ၊ သူတစ်ပါးကို အပြစ်မြင်နေကြသူတွေ အတွက် ဒီ သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဆုံးမ သြဝါဒ တရားလေးများကို ဖတ်မိပြီး ဘဝကို လှပစွာ ဖြတ်သန်း သွားနိုင်ကြစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတရားတော်လေးတွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့စာစီပြီး တော့ ဖော်ဝါ့မေးတွေမှ တစ်ဆင့် ဘယ်သူမှန်းမသိသော မျှဝေပေးသူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။
အားလုံးပဲ ဘ၀ကို လှပစွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း……. ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:39 PM
လောဘ ဒေါသ မောဟတွေနဲ့ လုံးဝကို မကင်းပါဘူး
ဒါပေမဲ့ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်တော့ ကြိုးစားရဦးမယ်
သိပေမဲ့လည်း တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ အသိက လွတ်သွားမိပြန်တယ်..